टाँस्न कार्बन फाइबर कार - एकदम सबैका लागि सम्भाव्य कार्य। मुख्य कुरा - laborious हुन यस्तो काम र धैर्य प्रदर्शन, प्रक्रिया रूपमा को पद्धति थाहा। तर समय र प्रयास वाहन को एक नयाँ नजर क्षतिपूर्ति गरिनेछ।
सुक्खा र भिजेको: त्यहाँ कार मा दुई यस्तो फिलिम को आवेदन तरिकाहरू छन्। पहिलो मामला मा प्रबंधक फिल्म एक पटक सवारी साधनको सतह लागू देखि, कला मा एक पेशेवर हुनुपर्छ। कि पछि, आफ्नो स्थिति सफल छैन समायोजन गर्नुहोस्। धेरै सजिलो टाँस कार्बन फाइबर गीला। र यो विधि को मुख्य लाभ सतह सुख्खा नभएसम्म कार मा फिलिम को स्थिति कुनै पनि समय समायोजित गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित।
अघि बढ्नु गर्न तत्काल काम परिवर्तन गर्ने उपस्थिति को कार, तिमी चाहिए तयार आवश्यक उपकरण। यी आवश्यक निम्न समावेश गर्नुपर्छ:
Squeegee (महसुस वा प्लास्टिक)।
स्टेशनरी चक्कु, कैंची।
मार्कर वा महसुस-टिप कलम।
एक हेअर निर्माण।
Soapy पानी बोतल स्प्रे।
सेतो आत्मा वा यसको बराबर।
उपकरण र सामाग्री को सबै उपलब्ध छ भने, यो टाँस्न रूपमा यस्तो हसाउने मामला सुरु गर्न सम्भव छ आफ्नो हातमा कार्बन फाइबर कार। लुगा धुने मेसिन - र सुरु गर्न पहिलो कुरा। यो हुनुपर्छ सम्पन्न ध्यान। हस्तक्षेप र छैन शरीर को चमकाने।
अर्को चरण - ब्लेड काटन। अझ सही परिणाम फिल्म .. लागू गर्न सकिन्छ प्राप्त गर्न छत, हुड, आदि: यो प्रमुख भागहरु सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो छ कारले शरीर र फिल्म टुक्रा मा रूपरेखा, जो तपाईं काटन छन् गर्न। यसबाहेक, आकृति workpiece कटौती गर्न सकिन्छ मा बृताकार। लागू गरेर जाँच गर्न amiss छैन।
शरीर को टाँस्न भागहरु लागि workpiece तयार हुँदा, तपाईं फिलिम संलग्न गरिने सतह degrease गर्न आवश्यक छ। यो अन्त गर्न, यो खनिज आत्माको वा अन्य कुनै पनि विलायक संग सखाप गर्नुपर्छ।
त्यसैले, तपाईं सतह र workpiece तयार गरेका छन्। यो तपाईं फिल्म समाधान गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो थियो। तर त्यसपछि यो सुक्खा टाँस्न कार्बन चल्छ कि बाहिर जान्छ। र यो मामला मा, भौतिक गर्न क्षति बिना काम गर्ने प्रतिबद्ध कुनै पनि कमीकमजोरी सच्याउन। तसर्थ, भाग को सतह को atomizer देखि drench साबुन समाधान हुन। काम को परिणाम पूर्ण भिजेको शरीर भागहरु हुनुपर्छ। सुक्खा ठाउँ हुँदैन!
काम भन्दा पहिले नै गरेको छ। स्टिक टेप - त्यहाँ धेरै छ। यदि यस कार्यका बिना, एक व्यक्ति द्वारा गरिन्छ माउन्ट टास्ने टेप हार्ड गर्छन्। यो संग, फिलिम को शरीर भागमा सुरक्षित हुनुपर्छ। यो रूपमा टाँस्न भागहरु को आकृति साथ सकेसम्म नजिक हुनुपर्छ गर्नुहोस्। फिल्म को विपरीत पक्ष मा समर्थन विभाजन गर्न आवश्यक छ। यसबाहेक, यो शरीर संलग्न र चिकना गर्न squeegee प्रयोग गर्नुपर्छ। यो पनि गर्न आवश्यक छ, र सजावटी कोटिंग बाँकी छ। सारा फिलिम शरीर भागहरु मा राखिएको छ, यो सुकेको हुनुपर्छ। यो आवश्यक हुनेछ हेअर ड्रायर निर्माण। यो 70-80 डिग्री सेल्सियस को न्यानो हावा तापमान एकै समयमा फिल्म गर्मी र डाक्टर ब्लेड को सतह समतल गर्न आवश्यक छ।
यो टाँस्न कार्बन फाइबर भागमा भन्दा छ। यस्तै प्रक्रिया वाहन शरीर बाँकी अनुगमन गर्नुपर्छ। दस दिन भित्र पछि प्रक्रिया कार धुन र छिटो चलाउनु सिफारिस गरिएको छैन। फिल्म राम्रो तरिकाले सुक्खामा र गिर थिएन लागि यो क्रममा आवश्यक छ।
त्यो टाँस्न कार्बन प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यस्तो आँखा प्रसन्न प्रक्रिया पछि कार फोटो। तिनीहरूले आश्चर्यजनक हेर्न।
प्रायद्वीप Indochina के विशेषताहरु छ
कसरी घर छिटो मा लामो कपाल बढ्न?
नियमको - यो अर्थ राख्छ? पुरानो करारका इतिहास
हामी किन wot मा एक राम्रो लेख चाहिन्छ? सफलता पहिलो कदम
कसरी अभिभावक र ट्रस्टिसिपिट प्राधिकारीले काम गर्दछ
किन सपना पूर्व-प्रेमी, र त्यो सपना मतलब?
Gianluca Vacchi - जसले छ र उहाँले प्रसिद्ध भए कसरी?
क्याप्टे र केयर